Isixa esikhulu se-carbon dioxide siveliswa ngexesha lokuveliswa kwe-aluminiyam ye-electrolytic. Oku akuhambelani nomoya "wokungathathi hlangothi kwekhabhoni" kunye "nokuphakama kwekhabhoni" okucetywe ziinkokeli zaseTshayina kulo nyaka uphelileyo. Kwixesha elizayo xa ukukhuselwa kwendalo kuxatyiswa ngakumbi, inkqubela phambili ye-electrolytic aluminium umthamo wokuvelisa iya kuchaphazeleka. Kwangaxeshanye, ishishini elitsha lamandla lifumana ingqwalasela engakumbi nangakumbi ngenxa yokukhuselwa kwendalo. Imfuno esezantsi ye-aluminiyam inyukile. Uluhlu oluphantsi lwangoku lukwabonisa ukuba unikezelo kunye nepateni yemfuno yemarike ye-aluminium ilungile. Ukuguquguquka kwexesha elifutshane kwamaxabiso e-aluminiyam kulindeleke ukuba komelele, kwaye kuyacetyiswa ukuba kuqwalaselwe ukongamela Imigaqo-nkqubo enxulumeneyo eyamkelwa ngabalawuli ukuqinisekisa ukubonelela nokuzinzisa amaxabiso.
Inani elikhulu leegesi ze-greenhouse zikhutshwa ngexesha lokuveliswa kwe-aluminiyam ye-electrolytic, kwaye imigaqo-nkqubo ithintela ukuveliswa kwe-aluminiyam ye-electrolytic.
Kwilizwe lam, uninzi lwe-aluminiyam ye-electrolytic iveliswa ngokuvelisa amandla obushushu. Thermal amandla okuvelisa ngokubanzi umbane ngokutshisa amalahle thermal (854, -2.00, -0.23%), kunye namalahle thermal uya kuvelisa isixa esikhulu carbon dioxide ngexesha lenkqubo yokutsha, nto leyo eyingozi kokusingqongileyo. Banga ingozi. Okwangoku, amandla elizwe lam lokuvelisa i-aluminiyam ye-electrolytic igxile kakhulu eShandong, e-Inner Mongolia, naseXinjiang. Ixabiso eliphantsi lombane kuMntla-ntshona liye latsala amandla amaninzi okuvelisa i-aluminiyam ye-electrolytic ukuze idluliselwe kwixesha elidlulileyo. Nangona kunjalo, phantsi kwempembelelo "yokungathathi hlangothi kwekhabhoni" kunye "nokuphakama kwekhabhoni", iindlela ezininzi zokulawula amandla aphindwe kabini zikhutshwe kwiindawo ezininzi, ezifana ne-Inner Mongolia, i-Ningxia, i-Guangdong, njl., eziya kuthoba isantya se-electrolytic aluminium. umthamo wemveliso. Kutshanje, "Isaziso sokuqinisa uLawulo lweeProjekthi "eziPhakamileyo ezimbini" ezikhutshwe yi-Ofisi Jikelele yoRhulumente waBantu wePhondo laseShandong lachaza ngokucacileyo ukuba iiprojekthi ezintsha "ezimbini eziphezulu" kufuneka zakhiwe kunye nokunciphisa amandla okuvelisa, ukusetyenziswa kwamalahle. , ukusetyenziswa kwamandla, ukukhutshwa kwekhabhoni, kunye nokukhutshwa kongcoliseko kufuneka kuphunyezwe ngokungqongqo. Enye inkqubo. Eminye imithombo yokunciphisa kufuneka ibekwe iliso, izibalo, kwaye ihlaziywe, kungenjalo ayisayi kusetyenziswa njengeminye imithombo. Ngokubhekiselele ekunciphiseni umthamo, iprojekthi ye-aluminium ye-electrolytic ayikho ngaphantsi kwe-1: 1.5. Ngokubhekiselele ekunciphiseni ukusetyenziswa kwamandla, umlinganiselo wokutshintshwa kwe-aluminium electrolytic ayikho ngaphantsi kwe-1: 1.5. Ngokubhekiselele ekunciphiseni ukukhutshwa kwekhabhoni endaweni, i-aluminiyam ye-electrolytic ayikho ngaphantsi kwe-1: 1.5. Iindawo ezininzi ziye zaqala ukuqinisa "ulawulo olubini", kwaye ukuveliswa kwamandla okuvelisa i-aluminium electrolytic kuya kuchaphazeleka.
Ngokombono weendleko, iindleko ze-alumina kunye neendleko zombane zizona zinto ziphambili ze-aluminium ye-electrolytic, kwaye zombini iindleko ziyakwazi ukuphendula malunga ne-35% yeendleko zokuvelisa i-aluminium electrolytic. Ngokubhekiselele kwi-alumina, ekubeni uhlaziyo lwecala lokubonelela alubandakanyi i-alumina, ukwandiswa kwamandla okuvelisa i-alumina akuzange kuchaphazeleke. Nangona kunjalo, ixabiso langoku le-aluminiyam ye-electrolytic liphezulu, kwaye imfuno ye-alumina evela kwizinyibiliki ze-electrolytic aluminiyam ezinokuvelisa zinamandla. Ngoko ke, imarike ye-alumina okwangoku ikwimo yokugqithiswa kancinci, kwaye iimali zokuthatha inxaxheba kwi-alumina zilinganiselwe, ngoko ke i-alumina iya kuqhubeka isebenza kwizinga eliphantsi kwixesha elifutshane.
Ngokubhekiselele kumalahle ashushu, akufuneki kuphela amalahle ashushu afunekayo ukuvelisa i-aluminium electrolytic, kodwa ngoku ilizwe liye langena ehlotyeni, iqondo lokushisa liye lanyuka kakhulu, kwaye imfuno yombane iye yanda, eye yavuselela ixabiso lamalahle ashushu. ukwenyuka. Ukusukela nge-24 kaJuni, ixabiso lendawo yamalahle ashushu laliyi-990 yuan. /Ton, kwinqanaba eliphezulu apha enyakeni. Ixabiso elinamandla lamalahle e-thermal liya kwandisa ixabiso lokuvelisa i-aluminium electrolytic, kwaye kukho inkxaso phantsi kwexabiso le-aluminium.
Uluhlu luyaqhubeka nokuhla, imfuno esezantsi yomlambo yamkelekile
Ukusetyenziswa kwe-aluminiyam ye-electrolytic igxile ikakhulu kumashishini afana nezindlu, iimoto kunye nezixhobo zasekhaya. Ukususela kumbono wedatha, ukusebenza kwephepha ledatha ye-real estate kwaqhubeka nokuphucula, kwaye ukunyuka konyaka-ngonyaka kwimveliso yemoto kunye nedatha yokuthengisa kwakusekukhulu. Izixhobo zombane zasekhaya zigcine izinga lokukhula kakuhle lonyaka ngokwemveliso, ukuthengisa kunye nokuthunyelwa kwamanye amazwe. Ingabonwa ukuba izinga lokukhula konyaka-ngonyaka wedatha efanelekileyo yoshishino lwe-aluminium terminal iye yajika. Oku kubonisa ukuba la mashishini ngokuthe ngcembe ayayisusa impembelelo yesiseko esezantsi ebangelwe ngubhubhani kwangelo xesha linye kulo nyaka uphelileyo, kodwa ngokuthe ngcembe abuyela kwinqanaba eliqhelekileyo lokukhula konyaka nonyaka. Kusathatha ixesha elithile. Ngoko ke, kwixesha elifutshane, kulindeleke ukuba ukusetyenziswa kwe-terminal ye-aluminium kuya kuqhubeka kulungile.
Amashishini angasentla zonke iimfuno zemveli for aluminiyam. Kulo nyaka, njengoko ulwazi lwabantu ngokukhuselwa kwendalo luye lwanda ngokuthe ngcembe, ishishini elitsha lamandla lifumene ingqalelo engakumbi. Amashishini afana neenqwelo zamandla amatsha, ii-photovoltaics, kunye namandla omoya ayakhula. Izithuthi zamandla amatsha zilandela ubunzima obulula, ngoko ke imizimba yazo yenziwa nge-aluminiyam. Isakhelo seeseli ze-photovoltaic zenziwe nge-aluminium alloy. Ialuminiyam ikwasetyenziswa kwiindawo ezininzi zomoya ezivelisa i-electrophoresis. Lilonke, umgaqo-nkqubo "wokungathathi hlangothi kwekhabhoni" awuthinteli kuphela inkqubo yokubeka amandla okuvelisa i-aluminiyam ye-electrolytic, kodwa ukwandise iindawo zokusetyenziswa kwe-aluminiyam ye-electrolytic.
Ngokubhekiselele kwi-inventory yentlalontle, ukususela ngo-Juni 24, ngokwezibalo, i-inventory yentlalo ye-aluminium electrolytic kwiindawo ezihlanu yayiyi-874,000 yeetoni, ukuhla kweetoni ze-16,000 ukusuka kwiveki ephelileyo. Uluhlu lwempahla ngexesha elifanayo kunyaka ophelileyo yayiziitoni ezingama-722,000. Uluhlu lwangoku lukwinqanaba eliphantsi le-3 kwixesha elifanayo leminyaka emi-5. Izinga eliphantsi le-inventri yexesha elizayo likwabonisa imeko yangoku elungileyo yokubonelela nge-aluminiyam kunye nemfuno.
Amaxabiso e-aluminiyam ahlala eqinile. Ukongeza kwimpembelelo yayo yangaphakathi, ikwanobudlelwane obuthile kunye nobutyebi obaneleyo baphesheya kweelwandle. Ichatshazelwe ngulo bhubhani, iUnited States ikhuphe uluhlu lwemigaqo-nkqubo yokuvuselela uqoqosho ukusukela kwikota yokuqala yalo nyaka. Uqoqosho lwehlabathi lwanele. Yimveliso enamaxabiso ehlabathi. Ke ngoko, ngokungabi namali ekhoyo, amaxabiso e-aluminiyam aya kunyuswa ngokwendalo. Nangona kunjalo, ukomelezwa okuqhubekayo kwamaxabiso eemveliso kwisiqingatha sokuqala salo nyaka kunyuse kakhulu iindleko zemveliso yamashishini asekhaya amancinci naphakathi, kwaye inzuzo yawo iye yachithwa. Le meko iye yatsala ingqalelo yabasemagunyeni. Ukusukela nge-12 kaMeyi, abasemagunyeni bathetha rhoqo ngesidingo sokugcina amaxabiso obonelelo kunye namaxabiso azinzileyo, kwaye izinto ezininzi zorhwebo zibuyile.
Isishwankathelo, "ukungathathi hlangothi kwekhabhoni" kunye "nokuphakama kwekhabhoni" akuthinteli nje ukukhutshwa komthamo we-aluminiyam ye-electrolytic, kodwa kwazala imfuno entsha ye-electrolytic aluminium. Okwangoku, uluhlu lwe-aluminiyam ye-electrolytic lusaphantsi kwaye izinto ezisisiseko zamkelekile. Amaxabiso e-aluminium alindelekile Ukuguquguquka kwexesha elifutshane kunamandla, kwaye sixhalabile malunga nokuba umgca we-19200 unokwaphulwa kwakhona. Kucetyiswa ukuba iinkampani ezichaphazelekayo zenze umsebenzi omhle ekulawuleni umngcipheko, kwaye kwangaxeshanye, kucetyiswa ukuba zithathele ingqalelo imigaqo-nkqubo echaphazelekayo eyamkelwe ngabasemagunyeni abalawulayo ukuqinisekisa ukubonelela kunye nokuzinzisa amaxabiso.